ओलीलाई मोदीले ‘सरप्राइज’ देलाउन ? को आउँदै छ स्वागतमा| Nepal Pati
ओलीलाई मोदीले ‘सरप्राइज’ देलाउन ? को आउँदै छ स्वागतमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँदिल्ली ओर्लेको भोलिपल्ट भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग विभिन्न चरणको छलफल र समारोहसहित तीन घण्टाभन्दा बढी कुराकानी गर्ने भएका छन् । मोदीको निमन्त्रणामा ओलीको यो भारतको दोस्रो राजकीय भ्रमण हो ।
कृषि क्षेत्र सम्बन्धित समझदारी कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित हुने भनिए पनि टुंगो लाग्न भने सकेको छैन । कान्तिपुरबाट